★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်မတွေသည် အကျင့်ပျက်မိန်းမတွေသာဖြစ်ကြောင်း. . . .
မွတ်ဆလင်မတွေသည် အကျင့်ပျက်မိန်းမတွေသာဖြစ်ကြောင်း. . . .
ပလီဆရာတွေဟာ ယောကျားတွေဖြစ်ပြီး မိန်းမတွေရဲ့ အတင်းကို သိပ်ပြောပါတယ်။ မွတ်စလင်မတွေဟာ သူတို့ ဇတ်အင်္ဂါကို စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင် ဓါးလှီးခံတဲ့အတွက် တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ယူဆထားရှာတယ်။ hijab ၀တ်မျက်နှာကိုဖုံးထားတဲ့အတွက် ယဉ်ကျေးသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း အမြဲတစေ ချီးကျူးပါတယ်။ သူတို့ကို နေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေကို စကပ်တိုတိုဝတ်ပြီး မကောင်းသည့်မိန်းမ များဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ပလီတွေဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို မကောင်းတဲ့ မိန်းမများအဖြစ် ရေးသား ပုံနှိပ်ပြီး ကုလားတွေ အကြားမှာ ဖြန့်ဝေတာ သိကြမှာပါ။ ကုလားဆိုတာ သူတို့ကို လက်ခံထားတဲ့ နိုင်ငံကို ကျေးဇူးမတင်တဲ့ အပြင် ဖျက်လို ဖျက်စီးလုပ်လိုတဲ့ သူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့မွတ်ဆလင်မတွေရဲ့ သိက္ခာ ဘယ်လောက်အထိရှိလဲဆိုတာ စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့ ကို N.W.O ရဲ့ လင့်တွေကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကဲ.. ဗီဒီယိုလေးတွေထဲမှာကြည့်ရင် မျက်နှာနဲ့ ခေါင်းကိုတော့ ဖုံးထားပါတယ်။ ဆက်တော့ မပြောချင်ပါဘူး။ ဟဲဟဲ လို့ပဲရယ်ချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကုလားတွေက မွတ်ဆလင်ကို ဝေဖန်ရင် နအဖလို့ပဲ စွပ်စွဲပါတယ်။ ဗီဒီယိုကော်မန့်တွေမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ အင်တာနက်မှာတော့ အမြဲတမ်း ဂျူးတွေကလုပ်တယ်လို့ စွပ်စွဲတာ မြင်နိုင်ကြောင်း .....
မွတ်ဆလင်မတွေ လိမ်ညာတဲ့ ဗီဒီယိုလေးနဲ့ စပါမယ်။ သူတို့မွတ်ဆလင်မတွေကို ယောကျားလေးတွေက အထင်ကြီးလေစားကြောင်း နဲ့ တခြားဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေကို မရိုမသေကြောင်း ရိုက်ပြထားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒဖြန့် ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြပါဦး။ (ဗီဒီယို ) ဗီဒီယိုထဲမှာ hijab ၀တ်ထားတဲ့ မွတ်ဆလင်မကို လူတိုင်းက ရိုသေတယ်ဆိုပဲ။ သူတို့ကို လူတွေက ရိုသေတဲ့ အမူအယာ ပြသလား? ရွံရှာ စက်ဆုပ်တဲ့ အမူအယာ ပြသလားဆိုတာ ကျနော်တို့ အားလုံးသိပြီးသားမို့ မပြောတော့ပါဘူး။ တခြားဘာသာတွေ မပြောပါနဲ့။ သူတို့ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းတောင် မွတ်ဆလင်မတွေကို ရိုသေလို့လား ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ hijab ၀တ်ထားတဲ့ မိန်းမတွေကို ဒုတ်နဲ့ ရိုက်ပြီး တိရိစ္ဆာန်တွေ ထိမ်းသလို ထိမ်းတယ် မဟုတ်ပါလား? မိန်းမတွေကို ခွေးလိုနွားလို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာ ရိုသေတယ်လို့ပြောမလား ? ဆော်ဒီမှာ မိန်းမတွေကို လူပုံအလယ်မှာ ဖင်လှုပ်ကခိုင်းတာတွေ၊ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အကမျိုးကခိုင်းတာတွေက မိန်းမတွေကို ရိုသေတယ် ပြောမလား?။ စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။
မွတ်ဆလင်မတွေက အပြာကားတွေကို တော်တော်ကို ကြည့်ထားဟန်တူပါတယ်။ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီး hijab နဲ့ စာသင်ခန်းထဲမှာ မိန်းမအချင်းချင်း တဏှာရူးတဲ့ဗီဒီယိုပါ။ ကြွက်တွင်းတောင် ချမ်းသာ မပေးတဲ့ မိုဟာမက် တပည့်တွေ ပီသလွန်းပါတယ်။
ရှက်ပြုံးလေးတော့ ပြုံးပြတော့ တမျိုးလေးချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမယ့် ခွေးမလို လေးဘက်ထောက်ပြီး ဖင်လှုပ်ပြတာ ရွံစရာကြီးပါ။ ကားထဲမှာ ဆိုပေမယ့် ဘေးကဘက်က ကားတွေက မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင် ဗီဒီယိုရိုက်နေလို့ ဖင်ပဲ လှုပ်ပြတာပါ။ ဗီဒီယိုမရိုက်ဘူးဆိုရင် မွတ်ဆလင်မ hijab နဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ကမြင်းကြော ထမလဲဆိုတာ တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
hijab နဲ့ မျက်နှာတော့ဖုံးပြီး ဖင်ကိုလှန်ပြယုံတင်မကပါဘူး။ မွတ်ဆလင်မက ဗီဒီယိုပါအရိုက်ခံတဲ့ ကိစ္စ ပလီဆရာတွေ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ?
မွတ်ဆလင်မတွေက ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားပါ။ ယောကျားမရှိလဲ နှာဘူးကတော့ ထမှာပဲဆိုတာ သူတို့ပါပဲ။ မိန်းမအချင်းချင်း လူမြင်ကွင်းမှာ နမ်းတာကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။
ဆော်ဒီက မွတ်ဆလင်မ ဓါတ်ပုံ ဘယ်လို အရိုက်ခံလဲ ကြည့်လိုက်ပါဦး။ တခြားယောကျားရဲ့ ရှေ့မှာ လုပ်ပြနေတာနော်။ အဲလိုမိန်းမမျိုး မြန်မာပြည်မှာ လုံးဝ မရှိပါဘူး။ မွတ်ဆလင် တွေမှာပဲရှိပါတယ်။
ကုလားကို မကြိုက်ဘူး။ အမဲကိုပဲ ကြိုက်တယ်ဆိုတာ မွတ်ဆလင်မတွေပါပဲ။ ကုလားတွေတော့ လှည်းကျိုးထမ်းရတော့မယ် =P (အားမငယ်ပါနဲ့။ Aisha က Safwan နဲ့ဖေါက်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် မိုဟာမက်က ကျေကျေနပ်နပ် လှည်းကျိုးထမ်းခဲ့ပါတယ်)
လူပုံအလယ်မှာ ခွေးမကြီးတွေလို လေးဘက်ထောက်ပြီး ဖင်ကို လှုပ်ခါရမ်းနေတာက မိန်းမကောင်း လုပ်ရပ်လား? မွတ်ဆလင် ကောင်တွေကလဲ သရေတွေကျနေတာ ကြည့်ပါဦး။
အထက်က ဗီဒီယိုအထောက်အထားတွေအရ hijab ၀တ်တဲ့ မွတ်ဆလင်မတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သိက္ခာမဲ့ဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ မိုဟာမက်ဟာ မိန်းမတွေထဲမှာ ၆ နှစ်အရွယ် Aisha ကို အချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (ကလေးချစ်တဲ့ မိုဟာမက်ပေါ့ဗျာ။ ကလေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီး ချိုချဉ်မပေးပဲ ဘာကြီးသွားပေးလဲ ပြောတတ်ပါဝူး) Aisha က Safwan နဲ့ ဖေါက်ပြန်တာကို လူတွေက မိုဟာမက်ကိုတိုင်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်ကြားချက်ကို သေခြာ မစစ်ဆေးတဲ့အပြင် တိုင်ပြောတဲ့သူတွေကိုပဲ ကြိမ်ဒဏ် ၄၀ ပေးပြီး ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မွတ်ဆင်မတွေ ဖေါက်ပြန်ပြီး ဆတ်စလူးမတွေ ဖြစ်နေတာ မိုဟာမက်လိုပဲ သဘောထား ကြီးသင့်ကြောင်း… အသိပေးပါရစေခင်ဗျာ။
ဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီး မွတ်ဆလင်ကို စော်ကားတယ်ထင်လား? ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ဦးခင်ဗျား။ ကျနော်နဲ့ ကိုမောင်ဆန် ပင်ပင်ပန်းပန်း ရေးထားတဲ့ မေတ္တာအစွမ်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြန်မာ့မြေမှ ပျောက်ကွယ်ရမည် (၁) နဲ့ မေတ္တာအစွမ်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြန်မာ့မြေမှ ပျောက်ကွယ်ရမည် (၂) ဖတ်ပြီးမှ အကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲ ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ မျောက်တူ ဆိတ်တူ မွတ်ဆလင်တွေ ပေါက်ကွဲတာ အရမ်းကြည့်လိုပါ ခင်ဗျာ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 4:21 AM